I-samsung enye ikuvumela ukuba utshixe ubeko lwescreen sasekhaya
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Isamsung enye ye-UI ikuvumela ukuba utshixe ubeko lwescreen sasekhaya
Isamsung enye ye-UI ikuvumela ukuba utshixe ubeko lwescreen sasekhaya
Ngubani ongahambanga ngengozi okanye osuse ngokuthe ngqo i icon kwiscreen sasekhaya? Ayisiyona ngxaki inkulu emhlabeni, kodwa inokuba yinto ecaphukisayo xa kufuneka uphinde ufumane usetyenziso kwaye ubuyisele i icon yayo kwiscreen sasekhaya.
Tshixa / vula isikrini sasekhaya
Isamsung ijonge ukulwa oku nenqaku elitshixayo / lokuvula ubeko lwescreen sasekhaya, ukuthintela izinto ekuhanjisweni okanye kususwe. Kwiifowuni ezisebenzisa i-Android Pie esekwe kwi-Samsung ye-UI enye, abasebenzisi ngoku banokwenza ukuba useto lwe'Khiya kweKhaya lasekhaya 'ukuthintela iingozi ezinjalo ukuba zingenzeki. Ewe ungayiseta ukuvula ubeko lwescreen sasekhaya.
Ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ungalusebenzisa ulusu lwakutshanje lweSamsung kunye neapos; isikhumba se-Android, unokwenza ukuba indawo isebenze phantsi koCwangciso> Umboniso> Iscreen sasekhaya. Nangona le iyinto abasebenzisi besiqalo sesithathu se-Android besonwabela iminyaka, i & apos zisakulungile ukubona umenzi wefowuni oyintloko eyisebenzisa kwi-launcher yayo emiselweyo.
Yiya kuseto> Umboniso> Iscreen seKhaya kwaye wenze ukuba 'uvale ubeko lwescreen sasekhaya'
Njengoko SamMobile amanqaku, useto lwe'Khiya kwesikrini sasekhaya 'njengangoku luyafumaneka kubavavanyi be-beta ye-Samsung One UI, nangona kufanelekile ukuba ilungele ixesha eliphambili xa ingxelo ezinzileyo ye-Android Pie iqala ukuphuma kubo bonke abasebenzisi.
Isicwangciso sexesha langempela imidlalo ye-android
Ukuhamba lodonga Android screen
ukugcinwa kwelifu kunye nehard drive yangaphandle
Ezona tshaja ziBalaseleyo zeApple
Zilishumi elinesihlanu ii-smartphones ezivavanyiweyo ukubona ukuba yeyiphi eyona inesibane esibalaseleyo (VIDEO)
Iindlela zeJava ArrayList ezinemizekelo
I-AT & T ibhengeza i-trio yezicwangciso zedatha ezingenamda
Imbali yenotshi: Ngubani owakopa ngubani (kwaye kutheni iApple ikwenze ngcono)